Dood & Su’aal: oo kaliya in lagu kicinayo damiirka dadka Madowga / Afrikaanka, maxaa marka xasuuq ka jiro Afrika, (waxaa jira dad dhintay), laakiin markaan ka hadalno baaritaanka badanaa, si dhab ah uma qaadno arrintaas haddii ay jiraan dad cadaan ah (waxa loogu magac daray Galbeedka) yaa ku dhintey xasuuqii?
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 7, 2020 00: 20 No Comments
"Dooddu way u furan tahay qof walba! "
Taasi waa in la dhaho Madowga / Afrika ma aadane aadan ?? Mise, waa su’aal de qalafsan ?? Waxa aan aaminsanahay in wax aan micne lahayn badanaa ay ka dhalato isku-dhac hoose ... Xaq mise been ??
Wax walba way adag yihiin inta u dhaxaysa caddaanka iyo madow, laakiin markii wax walba ay yihiin dadweyne, markaa dhacdooyinka yaryar ee nolosha maalinlaha ah waxay noqdaan xusuus.
Waxaa qoray, Polycarpe Tobalibi Tobombembe
Sep30 05: 30